Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Brazil Ederson Moraes Child Story Plus Ihe na-emeghi ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Goal Stopper onye amara aha ya mara; “Mgbidi Brik”.
Anyị Ederson Moraes Child Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Ederson Moraes Biography gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya, ndị nne na nna, nwunye (Lais Moraes), ndụ ndụ, ndụ onwe onye, ​​ịba uru na ọtụtụ eziokwu banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ebumnuche ya na-eche nche mana ole na ole na-ele Ederson Moraes 'Bio nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Ederson Moraes nke Childhoodmụaka - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Ederson Santana de Moraes mụrụ na 17th ụbọchị nke August 1993 na Osasco, São Paulo, Brazil. Nzụlite Ederson siri ike na Brazil. A mụrụ ya na nne na nna dara ogbenye bụ ndị na-enweghị ike ịnye nnukwu bọlbụ ka ha bụrụ ebe ikpeazụ.
Site n'oge mgbe ọ bụ nwa ewu, onye ọ bụla gụnyere onye nchịkwa ya na-akpọ ya mgbe niile "Nwa ehi". Nke a bụ n'ihi Ngwá football bụ mgbe ọ na-acha uhie uhie ma na-eto eto Ederson mepụtara ikike ịgba ụgwọ ya.
Ọrụ ebube ya bịara mgbe ọ gbara bọlbụ n'otu oge dị anya na ogologo ụkwụ ya wee si na igbe ya pụta na ọkwa ntorobịa.
Mee ka nke a nwee ike ịkwado ndị na-eti ihe, oku sitere na Europe bịara na ndị Benfica scouts bụ ndị mepụtara nnukwu mmasị na onye na-eche nche na-eto eto.
Naanị 16, Ederson gbara nanị XNUMX, ọ gbanwere gafee Atlantic na Benfica, na-esonye na Lisbon na-eto eto. Obi ruru ya ala na onye Brazil ha dị ka gburugburu.
Nnukwu ezumike ya na Europe wepụtara oge ya. N'oge ụfọdụ ka oge na-aga, e kwere Ederson ka ọ pụọ maka Ribeirao dị ala mgbe afọ abụọ gasịrị n'akụkụ nke Primeira Liga.
N'ụlọ ọgbakọ ahụ, ọ ghọrọ onye kachasị mma wee gaa n'ihu na-egwu Rio Ave. Ọ naghị ewe oge tupu Benfica n'akụkụ nwere mmasị na ya ọzọ.
Ọ malitere na otu 'B' otu ma gosipụta na ọ bụ onye ruru eru. Ederson na onye ọrụ ọhụụ ọhụrụ Bernardo Silva nọ na Benfica na-eto eto.
Ederson chere nnukwu nsogbu ihu mgbe ọ gara n'akụkụ ndị agadi. Ihe ịma aka kasịnụ ya bụ ọnụnọ nke onye agbata obi ya Julio Cesar, onye nlekọta ndị agha mara mma nke ọma, n'etiti posts.
Ihe mbụ Inter Milan bụ n'ezie ihe ngosi na 2015, na-enweta nhazi mgbasa ozi ruo 2018. Otú ọ dị, mgbe Ederson na-abịa, o were ya. Cesar mechara malite ọrụ ya na-eto eto kemgbe ahụ.
N'agbanyeghị ntorobịa ya, Ederson nwere ọganiihu, na-emeri Primeira Liga ugboro abụọ. N'otu oge, ndị otu ya nwere ọfụma ka ha meriri Zenit St Petersburg na Champions League.
Nke a guzobere nsogbu nke nkeji iri na anọ na Bayern Munich nke ejiri ya Pep Guardiola. Ederson chere ihu na onye njikwa ya n'ọdịnihu Pep Guardiola dị ka Benfica dịruru ala karịa ụkwụ abụọ na onye na-eche nche na-egwu egwu. Nke a kpuchiri Nke Pep ịhụnanya maka ya. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ọnye na-bụ Lais Moraes? Ederson Moraes Nwunye:
Nwunye Ederson Moraes mara ezigbo mma. Lelee ọmarịcha Lais Moraes, nwanyị nke mara mma mara mma.
Ha alụọla kemgbe afọ anọ ma ha abụọ nwere ada ha aha ya bụ Yasmin. Mgbe Ederson sonyeere Man City, onye ọ bụla enyeghị ya anya. Ọ bụ nwunye nwanyị ya bụ Lais ndị Fans ga-ele anya. Ndị enyi abụọ na-etinyekarị ọnyà mara mma na Instagram nke mmekọrịta ha.
A na-ahụ Moraes Mara mma nke ọma na oche na-eto nwoke ya.
Ederson Moraes Ndụ Nke Onwe:
Ndị Mara Ederson nwere àgwà ndị a na àgwà ya.
Ike Mara Ederson: Ọ bụ onye okike, onye nwere obi ụtọ, onye na-emesapụ aka, onye nwere obi ụtọ, obi ụtọ na nke ọma, ọchị.
Emeghị Ememe Ederson: Ọ pụrụ ịbụ onye ihere, onye mpako, onye isi ike mgbe a kpasuru ya iwe.
Ihe Ederson Maraes nwere mmasị: N'ezie, ọ na-achọ inyere ndị nọ ná mkpa aka, ihe nkiri, na-eme ememe ma na-enwe obi ụtọ na ndị enyi
Ihe Mara Ederson anaghị amasị gị: ọ na-achọ ka a leghara ya anya, na-eche eziokwu siri ike.
Na nchịkọta, Ederson dị ịrịba ama, ihe okike, inwe obi ike onwe ya, onye kachasị ma nwee onye siri ike iguzogide. N'elu olulu ahụ, ọ na-eme ihere mana n'ime ya ọ dị ka ọdụm nwere oke agụụ. Ọ bụ onye nwere ike imezu ihe ọ bụla ọ chọrọ n'akụkụ ọ bụla nke ndụ ọ na-etinye onwe ya.
Eziokwu attdị Ederson Moraes:
Ederson nwere 34 tattoos ama ọtọde ke idem esie. Ụra ndị a nwere mmetụta dịgasị iche iche, site n'okpukpe Ndị Kraịst ya, ihe omume football ya na ezinụlọ ya na Brazil.
Malite n'olu ya, Ederson nwere okpokoro isi na-adọrọ adọrọ na apụl Adam ya nke yiri ka ọ na-akụpịa ya site na ntị dị nro dị n'okpuru ntị ya.
Na obi ya gosipụtara okwukwe ya Ndị Kraịst. Ederson nwere nduru nke na-efefe n'elu okwu ahụ “Abụ m nke Jizọs” Ọ na-etinye ya n'osisi obe iji mee ka ciment sụgharịa okwukwe Ndị Kraịst ya.
Na ụkwụ ya bụ ngwongwo Portuguese League, ọ meriri ya na Benfica na 2015.
Ederson Moraes akụkọ nke na - Na-ezute:
Ederson na-eme 2.42 zọpụta kwa egwuregwu, tụnyere Claudio Bravo's 1.44, David De Gea 1.81 na Thibaut Courtois ' 1.52. Otu n'ime ndị dị otú ahụ na-azọpụta na-agụnye ya na-egosipụta ike ike ya na-etinye ọrụ ya na akara dị ka e sere n'okpuru.
Ihe osise dị n'okpuru ebe a na-egosi nzụlite nke zutere Sadio Mane.
Ederson Moraes Ndụ Ezinụlọ:
Igwa nne ya, papa, ụmụnne nwoke na ụmụnna nwanyị ndị maara Ederson ihe kachasị mma, ihe osise nke nwoke dị nwayọọ ma nwee obiọma. Nzụlite ya bụ ihe siri ike ego ma ndị mụrụ ya na-ebute ụkpụrụ na omume. Ederson sitere n'otu ezinụlọ nke okpukpe siri ike nke Ndị Kraịst.
Otu ihe a maara n'etiti ezinụlọ ya bụ mmesapụ aka. Ederson n'onwe ya nyere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ £ 10,000 na ụlọ Osasco mbụ ya na nso nso a iji nyere aka kwupụta ụgwọ ha ji.
Ederson Moraes Untold Bio - Ọrụ Ike Nwere:
O doro anya na Ederson bụ onye na-eme ihe ike, onye nwere obi ike, nke siri ike, na onye na-elekọta ya. Ederson nwere ume anụ ahụ, magburu onwe ya na nnukwu ịgba egbe na-akwụsị ikike.
Ọ mepụtara aha ọma dịka onye ọkachamara na-azọpụta ego n'oge ya na Benfica. Otú ọ dị, a na-akwanyere ya ùgwù maka nkesa ya na nkà ya na bọl na ụkwụ ya. Njide a na obi ike na bọl ahụ ga - enyere ya aka ijide onwe ya ma jiri aka ya ma ọ bụ ụkwụ mee ka bọl ahụ si n'ala azụ - ọbụna mgbe nrụgide. N'agbanyeghị afọ ndụ ya, ọ kwụpụrịrị maka mkpebi ya, nkwụsi ike, na ime ihe mgbaru ọsọ, nakwa ikike ya ịhazi nchebe ya.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ Ederson Moraes Childhoodmụaka Akụkọ ya na akụkọ eziokwu ndị ọzọ. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.